Fiaran-dalamby | RayHaber | raillynews
HomeRailwayKENTİÇİ Rail SystemsCommuter Trains
Fiovan'ny fitaterana fitaterana fitaovam
Konya Metro, Konyaray, Làlan-drindrina ary Logistics Center amin'ny Program 2020 Investment Investment
Ben'ny tanànan'ny Konya Metropolitan Uğur İbrahim Altay, ny filoha Recep Tayyip tamin'ny fandaharan'asan'ny fampiasam-bola 2020 noho ny vola natokana ho an'ny fampiasam-bola rehetra, indrindra ny Konya Metro, Konyaray, Ring Road, Logistics Center. [More ...]
Konya Metro dia nanomboka tamin'ny 1,2 Billion TL
9,1 miliara vola no natokana tao amin'ny fandaharan'asa fampiasam-bola 2020 ho an'ny Tetikasa Konya Metro an'ny TL 1,2 miliara. 7 tapitrisa TL dia natokana ho an'ny fiara ambanivohitra 148,7 hividianana ny Konya Suburb. 2020 [More ...]
Noraisin'ny TCDD ny fanapahan-kevitry ny fanajana ny Urgent ho an'ny Tetikasa Gaziray!
Ho an'ny tetikasa Gaziray, izay iray amin'ireo tetik'asa fitaterana manan-danja indrindra an'i Gaziantep, ny fananana sasany ao amin'ny Toprakkale - Bahçe, Nurdağ - Başpınar - Gaziantep - Lalamby lalamby Mustafayavuz dia tarihan'ny TCDD. [More ...]
Amin'ny firy no manomboka ny serivisy İZBAN? Amin'ny ora ahoana? Ity ny fotoana İZBAN 2020
Amin'ny firy no manomboka ny serivisy İZBAN? Amin'ny firy izao no hifarana? Ireto ny fandaharam-potoana İZBAN 2020; İZBAN no làlamby fiaran-dalamby lehibe indrindra an'ny firenentsika mifandray amin'ny seranam-piaramanidina, manompo eo amin'ny tsipika an-tsaha eo anelanelan'i Aliağa Selçuk. [More ...]
Gaziray sy Raybüs aorian'ny Tram
Şanlıurfa, izay tonga hatrany amin'ny olan'ny lozam-pifamoivoizana tsy tapaka, talanjona amin'ny hetsika fitaterana tanterahina any Gaziantep. Ny ben'ny tanàna Gaziantep Metropolitan Fatma Şahin dia nilaza fa namaha ny olan'izy ireo nandritra ny taona maro. [More ...]
Sets Fividianan-tsoavaly 8 amin'ny alàlan'ny lalamby ho an'ny Gaziray
Miaraka amin'ny fampindramam-bola arahin'ny Banky Islamika ho an'ny fandrosoana, fiara mavesatra 4 no hoentina ho an'ny Gazetin'ny Gazetiko Metropolitan Iller Bank Gaziantep. 8 totaliny miaraka aminà fiara 4 isaky ny andiany [More ...]
Ny ben'ny tanàna Kağan Mehmet Usta, izay manohy ny ezaka hataony amin'ny fampiroboroboana an'i Bursa İznik, no nanao ny hetsika voalohany. Metro Ankara, izay mandeha 15 ora isan’andro ary mitondra olona 200 arivo isan’andro, [More ...]
Başkentray Özgüneş Mijanona tsy azo ampiasaina ao anatin'ny 7 volana
Başkentray Özgüneş fiatoana, izay tondraka sy mihidy amin'ny fikojakojana ny orana mivatravatra ny volana jona lasa teo, dia tsy nampiasaina nandritra ny 7 volana. Nambaran'izy ireo fa nametraka ny fitarainany tamin'ny TCDD tamin'ny fanangonan-tsonia izy ireo, hoy ny mponina, 7 volana [More ...]
IZBAN sy Metro dia hiasa mandra-maraina
Hiditra amin'ny taom-baovao miaraka amin'i Ozan Doğulu i İzmir. Hanomboka amin'ny Cumhuriyet Square ny 22.30. Ny serivisy fitateram-bahoaka dia hikarakara mandra-pahatongan'ny taom-baovao. Munzmir Metropolitan Municipale dia nahavita ny fiomanana farany amin'ny fankalazana ny Taombaovao. [More ...]
Marmaray Machinists avy any İŞKUR
Ny minisitry ny fitaterana sy ny foto-drafitrasa Cahit Turhan, Gebze-Halkalı nanambara fa 245 dia nalaina tamin'ny alàlan'ny İŞKUR. SözcüAraka ny vaovao nataon'i Ali Ekber Ertürk; Fiofanana ho an'ny mekanika efa an-asa [More ...]
Gazety Vondrom-piarahamonina Gazetiko Gaziantep dia natao ny Fihaonan'ny Kaompanian'ny Kaompanian'i Gaziray, natao ny fampahalalana momba ny asa any ambanin'ny tany 5 kilometatra natomboka ho an'ny Tetikasa Gaziray. Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Fatma Şahin [More ...]
Başkentray Kaomisera amin'ny Komitim-piaramanidina Başkentray dia nanomboka
Başkentray Commuter Fiaraha-miasa momba ny fiaran-dalamby nanomboka; Ny kaominina ambanivohitra Ankara Metropolitan, Sincan-Kayas manompo eo anelanelan'ny isan'ny mpandeha ao an-drenivohitra no nanao fanadihadiana isan'andro. Olom-pirenena ao amin'ny Kaomin, Sincan, Etimesgut ary Mamak ... [More ...]
Gaziray Nalaina ambanin'ny tany alar asa nanomboka
Gaziray Takes ambanin'ny tany… nanomboka ny asa; Ivontoerana fivoriambe ara-kolotsaina-Zeytinli Firaisana ara-kolontsaina, Firaisana ara-tsosialy Mujahideen-Budak ary Toeram-pitsaboana-Hotely hanodinana ny toerana misy ny zotra 5 kilometatra. Ho an'ny famahana ny olan'ny fitaterana ao Gaziantep [More ...]
IZBAN Tepekoy Izmir Toerana fitobiana Bus
İZBAN Tepeköy İzmir Expedition Ora: İZBAN dia iray amin'ireo rafi-pitaterana fitateram-bahoaka an-tanàn-dehibe lehibe any Tiorkia ary misy serivisy seranam-piaramanidina manompo amin'ny sisin-tanety anelanelan'i Aliağa Selçuk. An'arivony isan'andro [More ...]
1 2 ... 139 »